NEWS – Page 5 – Voice of Somalis In Exile
Sabti-6th of Feb, 2021 (London)-Qof ayaa qudh-baxay, laba kalena weey liitaan ka dib markii muddo laba saacadood gudahood ah 10 qof lagu midiyeeyey koofurta London. Weerarka ayaa ka dhacay xalayto fiidkii, abbarihii 8:08 pm Wisbeach Road, Croydon, Koofurta London, UK. Dadka la midiyeeyey oo dhamaantood rag ah da’dooduna ay wada […]
Gabdha yar ee jisha filimada qosolka leh ee Mark Angel, Emmanuella Samuel, ayaa guri weyn oo qurux badan u dhistay hooyadeed. Emmanuella Samuel, oo ku dhalatay 22-kii July ee sanadkii 2010-kii, magaalada Port Harcourt, ee dalka Nigeria, ayaa mar qur ah qabsatay indhaha caalamka ka dib markeey ka soo muuqatay, […]
Wararka ka imaanaya Muqdisho, caasimadda Soomaaliya ayaa ku soo waramaya in qarax ka dhacay, meel u dhow iskuulo Boliidsiya oo hadda loo badalay magaciisa, Dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kaahiye. Booiska Soomaaliya ayaa xqiijinaya in qaraxu geystay dhimasho iyo dhaawac, hase yeeshee tirada dhan walba weli sugna. Mala hubo ilaa […]
Arbaco, 23th October, 2019 – AMW- 39 qof oo meyd ah ayaa laga dhex helay gaari weyni oo nooca xamuulka ah oo kunteenerada jiida, goob baabuurta xamuulka la dhigo oo ku taal gobolka Essex ee dalka Britian. Booliska ayaa u yeeray gawaarida xaaladaha degdeg ah la tacaala, saacadu markeey ahayd […]
Sabti, October, 19th 2019 (AMW)- Booliska Kuridstan ayaa sheegaya in Arbacadii la helay, meydka Suxufi caan ahaa, xaaskiisa iyo inan yar oo ay dhaleen. Madaxa booliska Suleymaaniya, oo markii hore sheegay in geeridu ahayd dil, ayaa hadda shir jaraa’id oo ay qabteen ku sheegay in ay waayeen cadeymo dhab ah […]